Olivier Rakotovazaha: Faty olona sy fatiantoka raha toa ...!
Nanorina ny KMSB tamin’ny 2002, birao politikan’ny antoko Mfm, ary isan’ny mpandrindra ao anivon’ilay donakafom-pirenena mandinika manolana ny fandrafetana làlam-pifidianana vaovao amin’izao fotoana izao ingahy Olivier Rakotovazaha.
Sehatra ara-dalàna natsangana eo anivon’ny Cslcc ity donakafo ity izay ahitana antoko 22.
Miady mafy ny amin’ny hanovana na farafaharatsiny hanitsiana ny lalàm-pifidianana ankehitriny ny tenany, satria io no niteraka fifandonana sy korontana teto amin’ity firenena ity. Koa tsy hiverenan’ny tantara nahatsiravina teto, araka ny resaka izay nataony tamin’ny faran’ny herinandro teo ary tsy hiverenan’ny Dakar I sy Dakar II dia tsy maintsy hirosoana ny fanovana ny lalàm-pifidianana.
Nampiasain’ny mpitondra hiarovana ny tombontsoany hatrany mantsy, hoy izy, io lalàna misy amin’izao io, ary azo amerezana ihany koa an’ireo kandidà izay atahoran’ny fanjakana. Porofon’izany ny kandidan’ny Mfm tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna tany Antanifotsy fahizany, izay tsy noraisin’ny lehiben’ny distrika tany an-toerana ny taratasy filatsahany hofidiana kanefa dia nivalona fotsiny tamin’izao, ary tsy nisy sazy kely akory nampilanjaina ny olona nanao fahadisoana tahaka izany.
Tsy misy dikany ity ady amin’ny kolikoly dradraina lava ity raha mbola hanjakan’ny hala-bato ary tsy misy mpifaninana mangala-bato raha tsy mpitondra fanjakana; izy rahateo no manana ny fahefana rehetra hanaovana izany. Matoa mangala-bato dia te hamerina ny vola laniny nandritra ny fampielezan-kevitra. Dikan’izay vonona ny hanao kolikoly izay mpangalatra vatom-pifidianana hoy ingahy Rakotovazaha. Nohararaotiny moa izany nitenenana fa tsy maharesy lahatra ny tenany loatra ny filazana fa 10 tapitrisa dôlara monja ny vola manjavona noho ny kolikoly. Kely izany hoy izy, ary tsy ampahafirin’ny harinkarena eto amintsika akory. Noho izany dia nambarany tsy nihambahamba fa misy olom-baventy tsy mbola sahy nokitihina tao.
Raha apetraka ary ny lalàm-pifidianana vaovao dia nosoritany fa zava-dehibe ny tokony hanomezana fahaleovantena ny CNE (filankevi-pirenena momba ny fifidianana), ampitomboina ny fahefany, ary tokony hipetraka amin’izay ny fahafahana manafay sy manasazy an’ireo mandika lalàna sy mangala-bato. Raha ireo teboka ireo fotsiny no tanteraka dia efa dingana goavana no vitsatsika, hoy ihany izy. Ny tsy fananan’ireo mpampiasa vola fahazotoana hanangana orin’asa eto mantsy, araka ny teniny, dia noho ny risika pôlitika. Ary ity risika ara-politika ity dia tsy avy aiza fa nateraky ny fifidianana hatrany. Nomarihiny fa ingahy James Bond mihitsy no nitondra izany fanehoan-kevitra izany.
Hentitra dia hentitra ary ity birao pôlitikan’ny Mfm ity raha nilaza fa hiteraka faty olona sy fatiantoka lehibe eto amin’ny firenena ny fiziriziriana tsy hikitika ny lalàm-pifidianana. Tsy hisy hahazo tombontsoa amin’izany anefa na iza na iza. Nambarany mazava koa fa raha ny heviny manokana no alaina dia tokony ho amin’ny volana desambra amin’ity taona ity no hanatanterahana ny fifidianana, saingy matoa mitranga ny daty hafa dia mety ho noho ny fisalasalana naterak’ilay fianianana anankiroa no mahatonga izany.
La rédaction Gdi 27-02-2006